Kaadị Data Recovey - Naghachi data si kaadị ebe nchekwa, SD kaadị, wdg
Mkpa kaadị ebe nchekwa data mgbake?
Olee otú ịrụ a na kaadị ebe nchekwa data mgbake?
1 Mkpa kaadị ebe nchekwa data mgbake?
Ọnọdụ 1: Accidently m Sony MMC kaadị ebe nchekwa ọkọdọ nkwụsịtụ mgbe m nọ na-insering ya na m kaadị agụ. Biko na-atụ aro ụfọdụ onye nwere ike agbake data site na ya.
Ọnọdụ 2: m ehichapụ ụfọdụ na-ezighị ezi photos ma na-achọ ha azụ. M nwere ọhụrụ mbipute nke Memory Stick Pro Duo mere site Sony na a Mac.The ebe nchekwa Iweghachite Mmemme ị nwere ike ibudata site Sony bụ nanị n'ihi na Windows, Òle ebe m nwere ike ịhụ a Mac Version.
Ọnọdụ 3: My SD kaadị ebe nchekwa maka ihe m kwuru na pịa igwefoto E merụrụ, ma ugbu a oge ọ bụla m na-etinye na kaadị m na laptọọpụ, niile na-egosi na ụfọdụ ọbịa gibberish. Mgbe m na-agbalị na-emeghe nchekwa na, ọ ga-emeghe.
Bụ n'ebe ọ bụla ụzọ iji nweta foto azụ?
Ụda maara? E nwere ihe ọzọ na ọnọdụ dị ka unu wee accross ụfọdụ ụbọchị. Mgbe nke a na-abịakwute gị, echegbula. E nwere mgbe a ngwọta a nsogbu. Tupu n'ịrụ solutio, i kwesịrị ntị ka ihe dị mkpa nke ahụ nwere ike ikpebi ma ị nwere ike nweta foto gị azụ kaadị ebe nchekwa. Mgbe ị na-efu photos ruru nhichapụ, format, virus ure ma ọ bụ ihe ndị ọzọ, ihe mbụ i kwesịrị ime bụ:
• ịkwụsị iji kaadị ebe nchekwa na-ọhụrụ photos
• adịghị nyefee ọhụrụ data n'ime kaadị
• Unu na-agbalị ịgụ kaadị mgbe ọ na-enyo na-keerughi
•-adịghị atụkwasị obi na kaadị ebe nchekwa data recovey software mfe ma na-agbalị ya na kaadị gị
• Buru kaadị gị nke ọma ma na-adịghị eme ka ọ bụla anụ ahụ mebiri
E nwere nnọọ mkpa Atụmatụ. Na i nwere ike naghachi furu efu data si na ebe nchekwa kaadị bụ nanị n'ihi na nke furu efu data na-adịghị n'ezie arahụ, dị nnọọ akara dị ka na-abaghị uru na ohere ọ na-ewe bụ reusable maka ọhụrụ data. Ya mere, ozugbo ọhụrụ data e dere na kaadị, nke furu efu data ga-overwritten ị na-apụghị naghachi ya ọ bụla data mgbake software maka kaadị ebe nchekwa. Ọzọkwa, ọtụtụ untrusted kaadị data recovey nwere ike ime ka njọ n'ihi gị furu efu data. Na nke anụ ahụ mebiri eme ka gị na kaadị tiwara data unrecoverable.
2 Olee ịrụ a na kaadị ebe nchekwa data mgbake?
Get a kaadị data reovery mbụ: Wondershare Photo Recovery nwere ike-ezi nhọrọ (ma ọ bụ Wondershare Photo Recovery for Mac ma ọ bụrụ na ị na-eji Mac OS X), nke na-akwado foto mgbake si kọmpat flash mgbawa kaadị, multimedia kaadị, xd, SD Obere na Micro kaadị, ala dijitalụ kaadị, oké dijitalụ kaadị (na ekwentị mkpanaaka kaadị, igwefoto dijitalụ kaadị), Foto dị na kaadị na ndị ọzọ na USB multimedia nchekwa ngwaọrụ. Ọtụtụ ihe, ọ dị mma ma dị mfe iji.
Free download na kaadị data mgbake software n'okpuru:
Ka na-na Photo Recovey maka Windows dị ka a na-agbalị na-eme ndị na kaadị ebe nchekwa foto mgbake nzọụkwụ site nzọụkwụ. Ọ bụrụ na ị bụ onye na Mac onye ọrụ, biko gaa na ndu ebe a.
Step1 Jikọọ na kaadị na kọmputa
Step2 Họrọ kaadị maka Doppler
Step3 Malite kaadị data mgbake
All recoverable data gụnyere audio, video na foto na-depụtara na scanning N'ihi. Preview na ego ndị ị chọrọ na iti na "Naghachi" iji nweta ha azụ.
Ihe i kwesịrị ntị bụ: Unu ịzọpụta natara photos na mbụ kaadị ọzọ, n'ihi ọhụrụ faịlụ ga overwrite furu efu photos. Ọ bụrụ na e ọ bụla foto efu, ị ka nwere ohere nke abụọ ka iṅomi na-agbake ha.
Rịba ama: Ndabere gị data si kaadị ebe nchekwa na ekwela ka a eme ọzọ.
Olee ka ihichapụ nkebi na Windows 10
Olee otú usoro Corsair Flash Voyager Iweghachite
> Resource> Naghachi> Olee naghachi Data si Kaadị ebe nchekwa